Nhoroondo - Blch Pneumatic Science & Technology Co., Ltd.
WENZHOU BLCH Pneumatic Science & Technology Co. Ltd yakabhadharwa nevashambadzi vashanu muTianyang Village, yuecheng Town, Yueqing City, iyo inongova nevashandi vanopfuura gumi uye zviuru mazana matatu zveyuan yegore rekugadzira kukosha.
Kuti ikurumidze kumhanyisa kukura kwekambani, guta rakanyoreswa rekambani iyi yaive mamiriyoni mashanu nemashanu emamiriyoni emadhora. Panguva imwecheteyo, zita rekambani rakasimudzirwa kuZhejiang Bailing Technology Co, Ltd., nevashandi vanopfuura makumi manomwe uye yegore rinobuda rehuwandu hweanopfuura mamirioni matatu yuan.
Kukanganiswa nedambudziko rezvemari repasirese, kukosha kwegore negore kunopfuura mamirioni e4.9 yuan, asi kambani haina kudzora tekinoroji yekutsvagisa nekusimudzira mari nevashandi, uye ikazivisa huwandu hwakawanda hwetekinoroji uye manejimendi yekuchengetedza matarenda, ichiisa hwaro hwakasimba yekukurumidza kukura kwekambani.
Iyo nyowani indasitiri nzvimbo iyo inovhara nzvimbo ye30 maeka muYueqing Economic Development zone yakatanga kuvaka. Pasi pehutungamiriri hwevatungamiriri vekambani, kambani yakagadzira nekukurumidza, iine vashandi vanopfuura makumi manomwe uye yegore rekugadzira kukosha kweanopfuura mamirioni gumi yuan.
Iyo kambani yakabudirira kugadzira pneumatic fittings akateedzana zvigadzirwa uye ndokuiisa mune yekugadzira mutsara. Pakupera kwaZvita, yakapedza imwechete yekubuditsa kukosha kwemamiriyoni 1.5 yuan uye huwandu hwehuwandu hwehuwandu hweanopfuura mamirioni e18,92. Mugore rimwe chetero, kambani yakagadzirira nekushandisa iyo Kingdee ERP yekushandisa chikuva kuti ienderere mberi nekufamba kwebasa.
Iyo kambani yakawedzera hunyanzvi hunyanzvi uye yakagadziridza akasiyana maficha ekugadzira maitiro. Izvo zvigadzirwa zvaive zvakakwana uye mhando yaive yakagadzikana. Panguva imwecheteyo, batch yemidziyo yekugadzira ine zvemhando yepamusoro tekinoroji, hunyanzvi hwehunyanzvi uye hwakazara tekinoroji yakatengwa, izvo zvakavandudza mhando yechigadzirwa uye nekukurumidza Kugadzirwa kwekugadzira. Hwerengedzo yegore rose yekuburitsa kukosha inosvika makumi mashanu emamiriyoni euan
Iyo kambani ichangoburwa humburumbira dzakateedzana uye PU chubhu akateedzana zvigadzirwa zvakabudirira, uye panguva imwecheteyo kumisikidza madhizaini maviri ekugadzira uye ekugadzira kuyera kugadzirwa, anopfuura makumi masere emabasa matsva, akapedza zvigadzirwa zvekugadzira zvinopfuura mamirioni e60 yuan, uye akabudirira kuziva wegore zvachose zvachose goho ukoshi mamiriyoni 80 Currencykuva. .
Mukutarisana nemusika mumwe nemumwe kudiwa, mutengo wevashandi wakagadziridzwa zvakanyanya. Pasi pekumanikidzwa kwakasiyana siyana, kambani yakatsunga kuisa mari yakawanda mukugadzirisa uye ruzivo rwekuziva kukwidziridzwa kwekambani zvine hungwaru nedhijitari, uye mugore rimwe chete, yakaisa huwandu hwekutengesa hunosvika pamamirioni zana nemakumi matanhatu. .